Tour – Somali Food
Quudinta Jidhka iyo Nafta
Nolosheenna waxay ku dhex milmeen cunto, koraaya, iibinta, iibsashada, iyo cunista. Qaar badan oo naga mid ah waxay leeyihiin xasuus adag oo ku salaysan cuntooyinka ciidaha ee qoyska iyo asxaabta, urta cunto ay jecel yihiin, ama cashar ku saabsan sida loo kariyo cunto karinta qoyska. Suuqyadu waxay siiyaan dadka waddanka u soo guurey cuntooyinka ku xidha xusuusta dalkooda hooyo, caadooyinkooda, iyo bulshadooda dhaqameed ee waddan cusub.
Kaliya waxaan rabaa inaan sameeyo waxay dadku u baahan yihiin. Dadkani waa sidii dad gaajoonaya oo kale. Waad ogtahay, xitaa mararka qaarkood aniga, xitaa haddii aan jeclahay cuntada waddankeyga iyo haddaan helin, waxaan dareemayaa inaan gaajoonaayo. Waxaan isku dayaa cuntooyin badan oo kala duwan, laakiin kuma dhergo. Cuntadooda ma helaan, laakiin maadaama aan halkan joogo, ayaga waan caawinayaa. —Goma Khadka, la-milkiilaha, RGS Nepali Market, Burlington
Walaalkey wuxuu ka sheekeyn lahaa inuu tago dukaanka Merola ee wadada ama Izzo’s. Iyo kaliya noocyo kala duwan oo farmaajo Talyaani ah. Waxaas oo dhami waxay ka yimaadeen Talyaaniga, waxayna keeni lahaayeen tubbo waaweyn oo calamari ah xilliga Christmas-ka. Oo wuxuu yidhi waad ka xidhi kartaa indhaha oo waxaad geyn kartaa dukaanka, oo wuxuu kuu sheegi karaa meesha uu joogo urta darteed, jiisaska, hilib la jarjaray ee qabow. —Michel Allen, degan Lubnaan, Burlington
Isku Xidhka Guriga iyo Midba midka kale
Beerashada iyo wadaagga cuntadu waxay isku xidhaan dadka gudaha iyo inta u dhaxaysa dhaqamada.
Inta badan suuqyadii hore waxay iibiyeen cuntada caadiga ah ee Maraykanka oo loo isticmaali karo cuntooyinka dhaqamo badan – qasacadaysan iyo alaab qallalan, hilib, caano, iyo wax soo saar. Suuqyada Kosher ee u adeegaya macaamiisha Yuhuuda waxay ahaayeen wax ka reeban. Suuqyada maanta waxay iibiyaan alaabada ay wadaagaan Aasiya, Afrika, iyo caadooyinka cuntada ee Bariga Yurub-miraha iyo khudaarta kulaylaha, xawaashyada, suugada, kalluunka, iyo hilibka.
Macaamiisha suuqa waxay daneeyaan isha cuntadooda. Macaamiisha Afrikaanka ah ee suuqa RGS Nepali waxay jecel yihiin kalluunka la qalajiyey meelo gaar ah, oo la yaqaan. Macaamiisha Polish-ka ee Suuqa Euro waxay ka rabaan kielbasa Poland. Macaamiisha xalaasha bulshada waxay door bidaan dhadhanka hilibka xalaasha ah ee laga keeno Australia. Milkiilayaasha suuqyadu way fahmeen muhiimada tan waxayna ku qaataan saacado raadinta isha alaabtan.
Jiilaalka qof walba wuxuu sameeyay tourtieres. Aabbahay si sax ah ayuu hilibka u shiidi jiray.Tourtieres-du waa hilibka Kanadiyaanka ah, waana isku darka hilibka doofaarka iyo hilibka lo’da. Hooyaday waxay samaysay farmaajo madax. Waqtigaas, runtii waxaa lagu sameeyay madaxa doofaarka. Taasi waxay ahayd dhaqan iyo sidoo kale boudin, taas oo ah sausage dhiigga. Aabbahay ayaa dukaanka ku samaysan jiray oo iibin jiray.
—Val Sicard, gabadh, Donat Danis, Suuqa Danis, Burlington
Waxaa laga yaabaa in ayna isku qiyaas ahayn, ama aysan keenin lacag badan sida tii Ciraaq, laakiin waa wax xasuusiya [macaamiisha] guriga marka ay soo galaan oo ay arkaan qaar ka mid ah alaabooyinka Carabiga. Kaliya waxay ka caawisaa inay helaan dhaqankooda waxayna og yihiin inay meel ka tirsan yihiin, laga yaabee xitaa haddii ay tahay dukaan yar.
—Gabadha Axmed Caref, maareeyaha, Nada Suuqa Caalamiga ee Nada, Winooski
Marka aan tago dukaamada caadiga ah, ma heli karo cunto Afrikaan ah oo aan u baahanahay. Markaa waa inaan aado-wuxuu noqon karaa dukaan Neebaal, dukaan Afrikaan ah, dukaan Soomaali ah, waxaan heli karaa cuntada aan runtii u baahanahay. Tusaale ahaan, halkan waxay ku leeyihiin hilib xalaal ah, anigu waxaan ahay Muslim sidaas darteed ma cuni karo [hilib kale].
—Zeynab Kouate, macmiil, Dukaanka Xalaal ee Bulshada, Burlington
Raadinta Cunto: Mulkiilaha Suuqa
Milkiilayaasha suuqyadu waxay ku dadaalaan inay helaan cuntooyinka ay codsadaan macaamiishooda.
Marka luqaddu ay caqabad ku noqoto, milkiilayaashu waxay adeegsadaan sawirro ay macaamiishoodu bixiyeen si ay u baadho internetka iyo inay u tusaan waratada bakhaarrada cuntada lagu qaybiyo iyo suuqyada magaalooyinka. Milkiilayaal badan ayaa sameeya wado dheer si ay u soo qaadaan dalabaadka dhowr jeer bishii sababtoo ah kharashka iyo xaddidaadaha gaarsiinta Vermont.
Milkiilayaasha suuqa hore waxay ka dalbadeen alaab khaas ah magaalooyinka waaweyn laakiin waxay ka soo iibsadeen alaabada ugu badan beeraha maxalliga ah, roodhida dubista, hiliblayaasha, iyo qaybiyeyaasha cabitaanka. Xubnaha bulshadu waxay sidoo kale soo celiyeen cuntooyinka markay booqanayaan qaraabada magaalooyinka sida New York, Boston, iyo Montreal.
Waxaan sameynay baaritaanno badan, sida aan u weydiinay macmiilka, “Qeybtee Afrika ka mid ah ayaad ka timid? Kongo? Ma ka timid Burundi? Togo miyaad ka timid? Waxaan isku daynaa inaan aruurinno macluumaadka ugu badan ee dadka aan awoodno iyo cuntada ay cunaan, waxaana isku daynaa inaan isku dhigno.
—Ratna Khadka, la-milkiilaha, Suuqa Neebaalka ee RGS, Burlington
Waa roodhidii dhaqankeennii, sidaas awgeed roodhi dhuudhuuban ayaanu cuni jirnay, sida dugsiga oo kale. Magaalada dhexdeeda, waxaan ku haysannay rootiyo badan oo ku yaal geesaha yar yar ee aan ku joojin doono. Bakhaarka guud ahaan waa xasuus badan.
—Dado Vujanovic, milkiilaha, Euro Market, South Burlington
Raadinta Cunto: Macaamilka Suuqa
Helitaanka cuntada — awooddeeda iyo u dhawaanshaha guriga — ayaa ah arrin muhiim u ah halka ay soogalootiga degaan.
Waa in ay jiraan suuqyo ku filan oo taageera baahida cuntada dhaqameed iyo macaamiil ku filan oo taageera ganacsiyaga.
Qeybtii hore ee qarnigii labaatanaad, suuqyadu waxay ku urureen Winooski iyo Burlington. Dadka deegaanka ayaa kaliya ku khasbanaaday in ay masaafo yar soo lugeeyaan si ay suuq u gaaraan. Suuqyadu hadda aad bay u faafeen waxaana laga yaabaa inay u baahdaan gaadiid dadweyne ama baabuur — caqabad ku ah qaar ka mid ah dadka Maraykanka ah ee cusub.
Sida qaar badan oo reer Vermont ah, dadka waddanka u soo guurey waxay ku beeraan khudaar iyo miraha jardiinooyinka dambe si ay u kabaan waxay ka soo gataan dukaamada. Qaarkood waxay ku koraan cunto caan ah oo ay maamusho Beeraha Cusub ee Maraykanka Cusub. Dhaqanka aan rasmiga ahayn ee la wadaaga dalagga dheeraadka ah xubnaha bulshada ayaa ka socda waddankii hooyo ilaa halkan.
Kuwo kale waxay bilaabeen ganacsiyo yar yar waxayna soo dejiyaan ganacsiyo si ay bulshadooda u siiyaan cuntooyinka qiimaha leh sida bidingaalka iyo kasaafada.
Waxyaabaha igu kalifay inaan go’aansado inaan sii joogo Vermont waxaa ka mid ah in uu jiro suuqa caalamiga ah ee Nada iyo sidoo kale waxaa jiray suuq Afrikaan ah oo aan u imaan karo oo aan ka soo iibsan karo cuntada guriga. Waxaan ku noolaa Pennsylvania laba sano, waana inaan ka tago sababtoo ah halkaas maan helin meel aan aado oo aan iibsado.
—Goma Mabika, macmiilka, Winoo
Oo waxaan soo gurtay wax badan oo miraha istaroobariga iyo digirta xidhmo, digir. Waxaan xusuustaa buuxinta dambiilaha weelka, anigoo keenaya dukaanka. Aabbahay, oo lahaa far-qorista ugu wanaagsan, oo ubax badan, wuxuu samayn lahaa dhammaan calaamadaha, “digirta xadhkaha guriga ee guriga.”
—Louis Mario Izzo, beerta ayeeyadiis Concetta, Burlington6
Runtii waa geed barakeysan.
—Muyisa Mutume, milkiilaha, M. Square Vermont, Winooski
Dhaqanka cunnada ayaa dadka ula guura oo waxay ku dhex milmaan waddan cusub. Cassava, oo lagu dhaqdo Koonfurta Ameerika, ayaa noqday mid ka mid ah Afrika iyo Aasiya. Sidoo kale loo yaqaan yuca ama manioc, caleemaha geedka waxaa loo isticmaalaa maraqa, iyo xididdadiisa waxaa lagu rusheeyaa bur ama la kariyey, dubay, ama khamiir leh si loo abuuro cunto karbohaydrayt leh.
Qoraal: Cassava ee fadhigiisu yahay Green Mountain wuxuu bixiyaa suuqyo badan oo deegaanka ah.
Afrika, sida caadiga ah, kaliya waxaad soo qabataa caleemaha cassava, oo waxaad garaacdaa ilaa ay aad u simanto. Waxay barteen inay ku baakadeeyaan qaboojiyaha, waxayna ku iibiyaan halkan. Waxay u dhadhamaysaa sidii tii wadankeenii oo kale.
—Faraja Achinda, macmiil, M. Square Vermont, Winooski
Qoraal: Hilib ariga barafaysan iyo kwanga, rootiga cassava-dhaqameedka ah oo laga keenay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo, ee M. Square Vermont
[Bulshada Lubnaaniyiinta] waxay ka soo dalbadeen Brooklyn, New York, waxaana loo yaqaan Shirkadda Sahadi. Waxaan xasuustaa amarrada boostada ee imanaya oo aan haysto waxyaabo ay ka mid yihiin snaubers, geedka geedka dhabta ah. Waxay haysteen wax la yiraahdo amardeen. Waxay ahayd maqaar khudaar ah, oo dhuuban. Qoysaska gaarka ah ayaa sheegi doona waxay rabaan, waxaana iman doona sanduuq weyn.
— Monica Simon Farrington, degan Lubnaan, Burlington.
Waxaan jeclahay wax iibsiga halkan Marka laga reebo qoyska oo cajiib ah – anigu shakhsi ahaan waan aqaanaa-cusub ee wax soo saarka uu ka helo magaalooyinka waaweyn, waxay ku takhasusaan maaddooyinka Aasiya, iyo runtii suuq kala duwan oo wanaagsan. Waad ogtahay, maaha Vietnamese kaliya, waa Jabbaan, waa Kuuriyada Koonfureed.
—Peter Maisel, milkiilaha makhaayadda iyo macmiilka, Thai Phat, Burlington
Kibbeh Lubnaaniis waxaa lagu sameeyaa hilibka lo’da oo shiidan ama ri, sareen/qamadi, basasha, iyo xawaash. Dhaqan ahaan waxaa lagu cunaa ceeriinka, sidaas darteed hilib cusub, oo aan caato ahayn waa muhiim.
Waxa uu gadaal ka mari lahaa miiskiisa qaboojiyaha lagu dhex lugeeyo oo uu ka soo bixi lahaa isagoo sita lugtaan hilibka lo’da ah. Waxa uu ku dul foorari lahaa miiskan weyn ee alwaax ka samaysan ee goynta oo uu soo afaysan lahaa mindidiisa. Xeeladdiisu waxay ahayd inuu laba jeer shiiddo, oo aad bay u jilicsanayd, waxay ahayd wax aan la rumaysan karin.
—Monica Simon Farrington, Macmiil Lubnaaniis, Suuqa George, Burlington
Aabahay waxa uu wax ka iibsan jiray North Street. Waxaa meeshaas ku yiilay bakhaaro badan oo Yuhuuda. Waxaana filayaa in aabahay uu aad ugu raaxaystay in uu ganacsi la sameeyo dadka Yuhuuda ah sababtoo ah dhaqan ahaan way inooga soo dhawaadeen oo way is fahmeen dhamaantood, waxaanay ku raaxaysan jireen inay is dhaafsadaan. Dhammaantoodna saaxiib buu la ahaa.
—Michel Allen, Lubnaan degan, Burlington
Waxaad soo gel wakhti kasta, xiitaa uma baahnid inaad wax iibsato, waxaad ku qaboojin kartaa dukaanka, wax kasta, waa nooc la mid ah guri kale, si daacad ah. Waxa ay ila tahay in aan gurigayga soo galay, ma garanaysaa waxa aan leeyahay?
—Emmanuel Braxton, macmiilka,Suuqa Neebaalka ee RGS , Burlington